कीर्तिपुरको इतिहास जोगाऔं- विचार - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक ५, २०७८ सम्पादकीय
शुक्रसागर श्रेष्ठकृत पुस्तक ‘कीर्तिपुरको सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक इतिहास’ बोल्छ— कीर्तिपुरमा लायकु दरबार पाटनका राजा सिद्धिनरसिंह मल्लका छोरा श्रीनिवास मल्लको पालामा बनेको थियो; बाबुसित मनमुटाव भएपछि कीर्तिपुरमा अलग्गै राज्य बनाएर बस्दा श्रीनिवासले लायकु र तलेजु मन्दिर बनाएका थिए ।
गोपाल राजवंशावलीअनुसार चारतले पञ्चपुरसहितको उक्त श्रीराजगृह राम्ररी जग हाली बनाइएको थियो  । साढे तीन सय वर्ष पुरानो सो दरबार अहिले छैन; कहिले ढल्यो, यकिन पनि छैन । प्राकृतिक कारण, कालक्रम आदिले दरबार, तलेजु मन्दिर तथा अन्य संरचना नाश भएको हुन सक्ने जानकारहरूको मत छ । तत्कालीन ब्रिटिस रेजिडेन्सीका चिकित्सक हेनरी एम्ब्रोस ओल्डफिल्डले सन् १८५५ ताका बनाएको स्केचमा कीर्तिपुर दरबारको भग्नावशेष देखिन्छ । केही दशकअघिसम्म पनि दरबारको भग्नावशेषलाई पर्खालले घेरिएको थियो । पुरातत्त्वको अध्ययनअनुसार अहिले पनि दरबारका अवशेषहरू जमिनभित्र लुप्त भएका हुन सक्छन्, यसबारे जान्न उत्खनन गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्खनन र थप प्रमाणहरूको खोजबिन गरी कीर्तिपुरको यस ऐतिहासिक साक्षी–सम्पदालाई फेरि पुरानै स्वरूपमा बनाउन सकिन्छ, बनाउनु पनि पर्ने हो । तर विडम्बना भन्नुपर्छ– सहरको ऐतिहासिक सानलाई पुनर्जीवित गर्ने सोच स्वयं स्थानीय सरकारमा छैन ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाले त ऐतिहासिक लायकु दरबार अर्थात् राजदरबारको भग्नावशेष भएको ठाउँमा वडा कार्यालय भवन बनाउन थालेको छ, यसका लागि टेन्डर नै आह्वान गरिसकेको छ । धन्न, सम्पदाप्रति चेतनशील स्थानीय बासिन्दाहरू पालिका–कदमको विरोधमा उत्रिएका छन् । प्राचीन रूपमै लायकु दरबार बनाउनुपर्ने आवाज बुलन्द बनाएका छन्, जुन सरासर जायज छ । नगरपालिकाले उनीहरूको मागको सुनुवाइ गर्नुपर्छ । नगरको ऐतिहासिकता यथावत् राख्न र संवर्द्धन गर्न आफैं अग्रसर हुनुपर्ने पालिका स्थानीयको आवाज सुनेर झकझकिनुपर्छ । र, दरबार क्षेत्र नमासीकनै पुनः प्राचीन रूपमै लायकु दरबार बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । बरु यस कार्यमा सहयोगका लागि पालिकाले संघ–प्रदेश सरकार र पुरातत्त्व विभागलगायतलाई अनुरोध गर्नुपर्छ । उक्त दरबारको भग्नावशेष कीर्तिपुरविशेषको मात्र होइन, राष्ट्रकै निम्ति चासोको विषय बन्नुपर्छ, त्यसैले यसको संरक्षण गर्न संघ र प्रदेश सरकारलगायतका सम्बद्ध निकायले आफैं पनि अग्रसक्रियता देखाउनुपर्छ ।
लायकु क्षेत्रमा लायकु डबलीसँगै आगम गुठी घर, सत्तललगायत संरचना छन् । वडा कार्यालय प्राचीन सत्तलमा छ, त्यही ठाउँमै नयाँ भवन बनाउन लागिएको हो । नगरपालिका कार्यालयले गत साउन २२ मा ‘लायकु’ निर्माण गर्ने भनेर टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर ऐतिहासिक दरबार रहेको ठाउँको साटो तलेजु भवानीको पूजा गरिँदै आएको क्षेत्रलाई क्षति पुग्ने गरी संरचना बनाउन लागेको भन्दै स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिए । त्यसपछि पालिकाले त्यसलाई सच्याउँदै साउन २८ मा वडा नं. १ को कार्यालय भवन निर्माणको टेन्डर आह्वानसम्बन्धी सूचना निकाल्यो । पछिल्लो सूचनापछि त स्थानीय झन् आक्रोशित छन् । पालिकाले भने वडा कार्यालय भवन दरबार रहेको ठाउँमा नभई पानी ट्यांकी भएको स्थानमा बनाउन लागिएको जनाएको छ । वडा कार्यालय भवन दरबारकै शैलीमा बनाउन लागिएको उसको भनाइ छ । यो कदममा वास्तविक दरबार नबनाउने नियत लुकेको स्थानीय बासिन्दाको विश्लेषण छ । वडा कार्यालय बनाउने खर्चले दरबार नै बनाउन पुग्ने उनीहरूको दाबी छ ।
वडाको व्यवस्थापकीय र प्रशासकीय कार्य सञ्चालनका निम्ति गतिलो कार्यालय अवश्य चाहिन्छ । यस्तो कार्यालय पालिकाले सहरको ऐतिहासिक पहिचान झल्कने गरी बनाउनु पनि उचित नै कुरा हो । खालि यत्ति हो— यस क्रममा पुरानो राजदरबारको भग्नावशेषमा खलल पुग्नु हुन्न, उक्त स्थान अतिक्रमित हुनु हुन्न । र, यसमा दरबार नबनाउने नियत पनि लुकेको हुनु हुन्न । तसर्थ, लायकु क्षेत्र ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले महत्त्वपूर्ण रहेकाले चार किल्ला सुरक्षित गरी संरक्षण गर्नुपर्ने र मल्लकालीन दरबारको भग्नावशेष भएको ठाउँमा प्राचीन रूपमै दरबार बनाउनुपर्ने स्थानीयवासीको मागप्रति नगर नेतृत्व संवेदनशील र सकारात्मक बन्नुपर्छ । नगरपालिकाले ऐतिहासिक दरबारलाई ब्युँताउने विश्वसनीय प्रतिबद्धता जनाई त्यसअनुरूप आवश्यक योजना अघि सार्नुपर्छ । आज दरबार नभए पनि भग्नावशेष त अवश्य छ, विभागको अध्ययनले पनि यही ठम्याएको छ । यसको संवर्द्धन गरेर भोलिका सन्ततिका लागि इतिहास सुरक्षित राख्नु सबैको दायित्व हो, यसको बोध सर्वप्रथम नगर नेतृत्वले गर्नुपर्छ । सम्बद्ध सबैलाई हेक्का हुनुपर्छ— इतिहासै मासिए आफ्नो विगत कहाँ हेर्छौं हामी ?
प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७८ ०६:५९
राहत र उद्धारमा कमी हुँदैन : प्रधानमन्त्री
कार्तिक ५, २०७८ ज्योति कटुवाल, भवानी भट्ट, तृप्ति शाही
सुर्खेत, कञ्चनपुर, बैतडी — बेमौसमी वर्षापछिको बाढीपहिरोले पुर्‍याएको क्षति तथा पीडितको अवस्थाबारे बुझ्न बिहीबार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्ला पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राहत र उद्धारमा कुनै कमी नहुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीलगायतबाट प्रदेशमा बाढीपहिरोले पुर्‍याएको क्षतिबारे जानकारी लिएका थिए ।
मनसुन सकिएपछि भएको वर्षाका कारण निम्तिएको विपत्तिले पुर्‍याएको क्षतिले सबैलाई दुःखी बनाएको उनको भनाइ थियो । ‘जलवायु परिवर्तनका कारण यति ठूलो महाविपत्ति खेप्नुपर्‍यो,’ सुर्खेत विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘बुधबार बसेको क्याबिनेट बैठकमा राहतको निर्णय गरिएको छ । जनधनको क्षतिको अनुगमनपछि थप राहतको व्यवस्था हुन्छ ।’
कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी नगरपालिका–९ मा पुगेर उनले बाढी प्रभावितलाई राहत र पुनःस्थापनाका लागि सरकार योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘हामी यहाँबाट फर्केर योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्नेछौं, बाढी प्रभावितलाई सम्बोधन गर्नेछौं,’ उनले भने । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरू बझाङ, डोटी, बैतडी र डडेलधुराको निरीक्षणपश्चात् कञ्चनपुर पुगेका उनले महाकाली तटीय क्षेत्र तथा ब्रह्मदेवदेखि कुतियाकभरसम्म हेलिकप्टरबाटै निरीक्षण गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई दोधारा–चाँदनी नगर प्रमुख वीरबहादुर सुनारले बाढीले पुर्‍याएको असर र क्षतिका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले महाकाली र जोगबुडा नदीले घेरिएको नगरक्षेत्र बाढीको उच्च जोखिममा रहेकाले यसको व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिन आग्रह गरेका थिए । ‘अहिले पनि कुतियाकभर र सुन्दरनगर क्षेत्र निकै प्रभावित भएको छ,’ सुनारले भने, ‘महाकाली किनारमा जाइकाले बनाएको बाँध पनि जीर्ण भइसकेको छ, यसको मर्मतसम्भार हुन सकेको छैन ।’
यसअघि सेती नदीले क्षति पुर्‍याएको बैतडीको ढुंगाड पुगेका प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष पीडितहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ढुंगाड–डोटी जोड्ने भत्किएको झोलुङ्गे पुल र नदीले असर गरेको बस्ती अवलोकन गरेका देउवाले सबै ठाउँमा यस्तै भएकाले आफू काठमाडौं फर्केपछि केही निर्णय गर्ने पीडितहरूलाई आश्वासन दिए । क्षति देखेपछि राहत र पुनःस्थापनाबारे प्रधानमन्त्रीले केही प्रतिबद्धता जनाउने आसमा रहेका पीडितहरूले भने खिन्न बनेको प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रधानमन्त्री नै बाढीग्रस्त बस्तीमा आइपुगेका बेला केही ठोस निर्णय गरेर जानुहुन्छ भन्ने आशा थियो । तर सामान्य आश्वासन पनि पाइएन,’ स्थानीय राजेन्द्र चन्दले गुनासो परे, ‘हामीले पटक–पटक डुबानमा पर्ने ढुंगाडबस्तीलाई तराईको कुनै स्थानमा सारिदिन माग गरेका छौं । अब यहाँ बस्न सकिने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीले हेरेर गएपछि पक्कै यसमा पहल हुने अपेक्षा छ ।’
दुवैतर्फबाट सेती नदी बग्न थालेपछि २ सय ५० भन्दा बढी घरधुरी रहेको यो बस्ती २ दिनसम्म बाढीको चपेटामा परेको थियो । जलस्तर घट्दै गएपछि माथिल्लो क्षेत्रका विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र आफन्तकोमा आश्रय लिइरहेका स्थानीयहरू पुनः बस्ती फर्किन थालेका छन् । तत्काललाई बसोबास र खाद्यानको समस्या नभए पनि पछिलाई सोच्नुपर्ने वडा–५ का वडाध्यक्ष रामबहादुर बोहराले बताए । ‘खेती सबै सखाप भएकाले केही समयपछि भने बस्तीमा खाद्यान अभाव हुने देखिन्छ,’ उनले भने ।
अवलोकनका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आले, पूर्वमन्त्रीहरू एनपी साउद र रमेश लेखकलगायतको टोलीसमेत थियो ।
प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७८ ०६:५०